Qisadi Nabi Daniyeel Caleyhi Salaam Iyo Libaaxi Loo Tuuray
Waxaa jirtay in Waqtiyadi Bakhta-nsar u dalka Shaam halaaga ku hayey u soo qabtay laba Libaax oo ku xareeyey Ceel. dabeeto waxaa amarkiisa lagu soo qabtay Nabi Daniyeel oo sida la sheegay malaha ka diiday bakhta-nasar inu Riyo u fasiro, dabadeed ku tuuray ceel ay ku jireen laba libaax oo aad u baahanaa, hasa ahaate libaaxyadi waxba uma aysan geysan, waxuuna halkaas ku jiray mudo xoogaa ah, dabeeto Danyeel baahi iyo oon ayaa qabatay.
Alle baa waxuu u wax-yooday Nabiga Armiya oo markaas joogay Suuriya, waxaa lagu yiri; u diyaari raashin iyo cabitaan Daniyeel .. Armiya ayaa ku jawaabay oo yiri: Rabiyow anigu waxaan jooga Suuriya, Daniyeel-na waxuu jooga Ciraaq .. Alle ayaa ku yiri; fal wixii aan ku amray inaad fasho, oo waxaan ku soo dirin cid ku qaada adiga iyo cuntada aad diyaarisay. .. Armiya wixii la amray waa falay, dabeeto Alle waxuu u soo diray mid qaada isaga iyo cuntadi u diyaariyey illa u gaaray ceelkii Afkiisa.
Danyeel oo ceelkii guntiisa ka hadlay ayaa maqlay shanqar waxuu yiri waa kuma? waxuu yiri waa Armiya. Daanyeel waxuu weydiyay maxaa ku keenay halkaan,. Armiya waxuu yiri; Rabigaa baa ii kaa soo diray. Danyeel waxuu yiri: ma rabigey baa i xusay. Armiya waxuu yiri haa Daniyeel, markaasa Danyeel sidaan u xamdi naqay:
Xamdi iyo mahad waxaa leh Allaha ee aan hilmaamin kuwa xusa.
Xamdi iyo mahad waxaa leh Allaha ajiiba baryada kuwa rajeeya.
Xamdi iyo mahad waxaa leh Allaha aan marnaba hoojin kuwa tala saarta ee qofkii samra samata-bixiya samaanta ku guda samaan ka badan oo dhibka raacsha faraj dhaw.
Xamdi iyo mahad waxaa leh Allaha ee na badbaadiya markii aan weyno camal aan la hortagno ee na siiyo rajo markii aan wax walba ka rajo go'nay.
Nin la oran jiray Abu-Caaliya ayaa laga wariyey inu yiri: markii aan ku duulnay oo qabanay Magalada Tastur ee maqrib al-carabi(hadda Tunis raacsan), waxaan ka helnay keydadkii Dawladi boqortooyada hurmusaan-iiraan ee magaaladaas xukumeysey ka soo qaadnay Sariir u ku jiifey Daniyeel kitaabna u yaal madaxiisa agtiisa, waxaan u soo qaadanay xaga Cumar bin Khidaab .. Cumarna waxuu u yeeray nin kitaabka ku tarjuma afka carabiga kaaso markii la akhriyey laga helay qiisooyin taxan oo laga qoray Daniyeel ka sheekeynaaya dhacdooyinka jiray iyo saadaasha mustaqbalka Daniyeel loogu waxyooday .. Kitaabka waxaa kalo laga akhriyey in Qabriga Daniyeel 13 jeer goobtisi laga kala badalay si aan loo qufan oo dad u qaadan, maxaa yeelay waxaa la yiri sariirti u ku seexan- jiray ayaa markii roob doonta la rabo dibada loo soo saari- jiray .. Daniyeel jirkiisi waxba iskama badlin, waayo hilbka anbiyada kuma baaba'aan carrada bahalada iyo ddugaagana ma cunaan.
Waxaa la sheegaa in lix magaalo midkood u qabriga Daniel ku yaal, oo ka mida magaalada Babylon, Karkuuk iyo Muqdaadiyah oo intaba ciraaq ku taal, waxaa kalo la sheegaa inu ku duuganyahay magalada Susa Iyo Malamir midkood oo ku taal dalka iiraan